Iiblogi zeTekhnoloji ezi-10 obungazi ngazo | Martech Zone
Iiblogi zeTekhnoloji ezi-10 obungazi ngazo
NgoMvulo, nge-25 kaJanuwari, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Iiblogi zeTekhnoloji zibalulekile Martech Zone. Xa ndibhala malunga nendlela itekhnoloji ethile echaphazela ngayo ukuthengisa, ihlala ikhuthazwa yibhlog yetekhnoloji. Ngokwesiqhelo benza umsebenzi omkhulu wokugubungela iindaba kunye nezimvo malunga netekhnoloji, kodwa baphoswe kukusetyenziswa kwayo kwentengiso.
Amakhwenkwe amakhulu ahlala ezama ukufumana ezona ndaba zinkulu, intlebendwane yakutshanje, okanye ukuzama ukuphosa isihloko esikhulu seposi esitsala umdla womntu wonke. Kuninzi okungakumbi okuqhubekayo kwiTekhnoloji ekufuneka uyazi ngayo, nangona kunjalo. Aba bantu bahlala ngaphezulu kwayo!
Nazi iibhloko zeTekhnoloji ezi-10 obungazi ngazo:
Yintoni uNoo -U-Patric ungumhlobo olungileyo kwaye inkampani yakhe ifundisa 'abantu abangafundanga'.
Ukoyikeka kukoyikeka -UJeff uneengcebiso ezixabisekileyo kwaye ukubhala kwakhe kuhlala kuyinto ehlekisayo.
UKen McGuire -U-Ken ugubungela indlela itekhnoloji ebutshintsha ngayo ubomi bethu bemihla ngemihla.
Kodwa Uyintombazana -Kukho isithuba samazwi ababhinqileyo kwisithuba seTekhnoloji. UAdria uyayigcwalisa.
StarterTech -Le bhlog yenza ukuba kube lula ukufunda itekhnoloji.
Itekhnoloji kunye nokuThengisa iBhlog yoMthetho -U-Eric ugubungela onke amatyala enkundla achaphazela iiteknoloji kunye nabathengisi ngokufanayo.
IiQuips zeChip - Umhlobo wexesha elide Martech Zone, I-Chip ihlala ikliphulela ezinye zeendaba ezilungileyo kwi-net.
Izivakalisi ezi-2 okanye eziNcinci-Nokuba zimfutshane kunezithuba ze-Chip, umhlobo uBill Dawson uqhubeka phambili kwitekhnoloji kwaye unikezela ngeenkcazo ezithile.
Amandongomane kwiNzuzo - omnye umhlobo webhlog, uThor Schrock udibanisa itekhnoloji kunye nenzuzo kwibhlog yakhe.
Yonke iBhlog yeTekhnoloji kaJoe -Umhlobo olungileyo uJason Bean uqhelekile kwibhlog nganye kaJoe.
Ngamanye amaxesha iibhloko azinakho ukujonga okucocekileyo kunye nokuziva- kodwa umxholo uhlala ulapho! Yongeza ezi bhloko kwi-feed reader yakho kwaye ndiqinisekile ukuba awuyi kuphoxeka.
tags: ukugcinwa kwabathengiidatha yezentlalo
Ngaba iChaCha ikrelekrele kuneGoogle?
Abantwana abaCobblers abanazihlangu
Jan 29, 2010 ngo-7: 24 PM
Wowu, enkosi, Doug! Kuluzuko kum ukubandakanywa kuluhlu olunje nge-august- ngakumbi ngokuthandwa nguJeff Atwood.